सवारी साधन इतिहास रिपोर्ट
एक नयाँ कार किन्न खर्च गर्न सक्दैन मानिसहरूलाई धेरै छन्, वा छोराछोरीलाई एक लागि पहिलो कार खरीद छन्. कसैले एक कागति किन्न चाहन्छ, वा एक वाहन खराब दुर्घटनामा भएको छ, र सबैलाई छ कि एक पूर्व-स्वामित्व वाहन खरिद गर्न चाहन्छ राम्रो अवस्थामा अधिक वा कम. तपाईं एक पूर्व-स्वामित्व कार खरीद मा योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं किन्न जो कार मा निर्णय र एक लगानी गर्नुअघि विचार गर्न आवश्यक छ कि धेरै कुराहरू छन्. शायद तपाईं खराब वाहन खरीद आफूलाई जोगाउन गर्न सक्छन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा को एक वाहन इतिहास रिपोर्ट खरीद छ, पनि एक VIN जाँच रूपमा चिनिएको.
एक पूर्व-स्वामित्व कार खरीद गर्नु अघि तपाईंले पहिलो तपाईं बुद्धिमानी लगानी बनाउने छन् भन्ने ग्यारेन्टी मदत गर्न प्रश्न मा कार बारे केही आधारभूत तथ्य पत्ता गर्नुपर्छ. तपाईं एक कागति देख छन् कि एक हौसले बाफ साफ इन्जिन खण्ड साथ राम्रो सफा र चमकदार कार छ? यो एक खराब कार दुर्घटनामा भएको छ, या शायद यो एक बाढी मा भएको छ, या बुरा अझै, यो चोरी भएको छ? एक कार इतिहास रिपोर्ट खरीद र एक VIN चलिरहेको द्वारा तपाईं सजिलै यी प्रश्नहरू र एक पुरा धेरै केही जवाफ दिन सक्नुहुन्छ जाँच अधिक.
विशेषज्ञहरु को धेरै तपाईं खरीद विचार छन् कि कार मा एक वाहन इतिहास रिपोर्ट भएको शायद एक प्रयोग कार खरीद गर्दा तपाईं बनाउन सक्छन् smartest चाल को छ भनेर तिमीहरूलाई भन्नेछु. तपाईं यो जीवनकालमा हो त्यो विशेष कार वा ट्रक माध्यम भएको हुन सक्छ के थाहा कहिल्यै. तपाईं एक ठूलो भित्री र बाहिरी रूपमा सफाई र राम्रो द्वारा लुकेको सकिन्छ कति कुराहरू मा amazed हुनेछ, चमकदार, रंग को ताजा कोट.
सवारी साधन इतिहास रिपोर्ट र VIN जाँच लगभग सबै प्रयोग कार र ट्रक को ट्रयाक रेकर्ड जाँच गर्न ठूलो बाटो हो. यी रिपोर्टहरू को गाडी धारावाहिक नम्बर आधारित कारहरुको इतिहासको एक रेकर्ड संग खरीदारों प्रदान (वाइन), र तिनीहरूले VIN द्वारा कार इतिहास जाँच. एक VIN नम्बर जाँच देखि कुराहरू देखाउने DMV र बीमा रेकर्ड, सम्भव ओडोमिटर धोखाधडी जस्तै, कि वाहन पनि कागति व्यवस्था किन्न पीठ लागि सम्झन्छन्, र पनि अधिक महत्वपूर्ण तिनीहरूले स-सानो वा प्रमुख संघर्ष क्षति देखाउने. कहिलेकाहीं जानकारी पनि वाहन एक छिटो कार थियो कि वा छैन रूपमा उपलब्ध बनेको छ वा एक कार भाडा मा छिटो देखि खरिद थियो.
Vin नम्बर जाँच
त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरु कार इतिहास जाँच गर्न अनलाइन छन् र एक VIN नम्बर खोज गर्न. सवारी साधन इतिहास रिपोर्ट र VIN जाँच मोटरसाइकिल गर्न कार र ट्रक र एसयूवी गरेको देखि सबै को लागि उपलब्ध छन्, एटीवी गरेको (सबै भू-भाग वाहन) र मनोरंजनात्मक वाहन (RV गरेको).
कति यी रिपोर्टहरू खर्च विक्रेता गर्न विक्रेता देखि भिन्न र आसपास सामान्यतया छ $20 गर्न $40 डलर. मुक्त advertise कि व्यक्तिहरूलाई बस decoders सामान्यतया छन्, हामी पछि जो प्राप्त हुनेछ. एक वाहन इतिहास रिपोर्ट खरीद तपाईं खरीद बारे हो वाहन बारे मन केही शान्ति भएको तिर्न सानो मूल्य छ. यो संभावित सडक तल यांत्रिक मरम्मत मा कार संग समस्या मा तपाईं डलर हजारौं बचत सक्छ जब यो तिर्न पनि पैसा एउटा सानो राशि छ. कसैले एक कार बिक्री गर्दा धेरै पटक तिनीहरूले कार समस्याको बारेमा बताउन छैन. पनि परीक्षण एक कार ड्राइभिङ र साँच्चै राम्रो यो भन्दा देख पछि, तपाईं कार गलत छ भनेर सबै मा टिप्न सक्छ. तपाईं आफ्नो मिस्त्री गर्न कार लिन पनि जब, तिनीहरूले हरेक अब र त्यसपछि कुराहरू सम्झना सक्छ.
यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ तपाईं किन एक वाहन इतिहास रिपोर्ट भएको र एक VIN जाँच गरिरहेको देख्न सक्छौं अब त. यो तपाईं खरीद सोचिरहेका छन् वाहन बारेमा एक अधिक अवगत निर्णय गर्न अनुमति हुनेछ. सबैभन्दा अवस्थामा तिनीहरूले वरिपरि खर्च $20 गर्न $40 र यो एक कुनै brainer बनाउँछ. तपाईं लगानी गर्न भनेर पैसा एक टन COSTING तपाईं सधैं मरम्मत पसलमा बस््छ र माथि समाप्त एक वाहन जोगिन मदत गर्नेछ लागि यो पैसा को एक सानो राशि छ.
सर्वश्रेष्ठ सस्ता कार इतिहास रिपोर्ट अनि सस्ता Vin जाँच समीक्षा